I-china abakhiqizi bomzimba we-Vibrating Body Muscle Massage Gun nabaphakeli | Zhaolong
Uhlobo lwenjini: 4026 brushless DC
Amandla webhethri: 2500mAh （18650 Li-on Battery 2pcs）
Izinhloko Zokumasaja: Amakhanda ama-massage ama-4
Amplitude ibanga: 7.0mm
I-motor torque: 40 mN.m
Shintsha: 5-isikhundla switch
Zungezisa Isivinini: 1400-3000RPM
Isikhathi sokushaja: 3-4hours
Isikhathi sokusebenza: 3-5hours
Usayizi womkhiqizo: 149x61x184mm
Lesi Sibhamu Sokuphatha seFascia Massage sinokusebenza okuvelele. Ngobuchwepheshe bomsindo obuthule nempilo yebhethri yamahora ama-5, isibhamu sokubhucunga umzimba sizohlinzeka ngemasaji ephumelela kunazo zonke owake wazizwela enethezekile lekhaya lakho. Inikeza umuzwa wokuphumula wokuphumula futhi inciphise ukulimala kwethambo. Khetha isivinini esihlukile ngokuya ngeqembu lakho lemisipha kanye nokuncamelayo kwakho. Ngaleyo ndlela kunikezwa ukukhululeka okujulile kwemisipha, ukululama okuphelele, ukunciphisa izinhlungu nokwanda kokunyakaza. Thola Ukuphumula Okupholisayo, Ukuphulukisa Okujulile ngaleli khono lobuchwepheshe be-Electric Massaging Gun ngobubanzi obugcwele bejubane lokushaya kwenhliziyo futhi kufakwe amakhanda wokubhucungwa. Uma ufuna isibhamu sokuphatha esiphatha kakhulu ungathatha noma yikuphi lapho ungahambi kahle ngalesi. Ukulawulwa kwe-LCD. Ye-ON / OFF & switch switch 5-Hour Run Isikhathi. 2,500 mAh ibhetri ingasetshenziswa isikhathi eside ngokushaja okugcwele Amaleveli ama-5 weSivinini. Finyelela amazinga ahlukene wokubhucungwa
Mini Osayizi & ephathekayo. Kulula ukuyisebenzisa nokuthwala, jabulela ukusikhipha noma kunini nanoma ikuphi ≤55db. Umsindo ophansi, uqinisekisa indawo ethulile nenethezekile yokusebenzisa. Amakhanda ama-massage angashintsha. Ilungele ukusizakala okukhethekile, okubhekiswe kubo nokusizwa
Izibhamu zethu zokubhucungwa zihlinzekwa ngamakhanda amane aphathekayo, okulula ukuwahlanza. Ngokubambisana amakhanda ahlukene asekela izindlela zokwelapha ezahlukahlukene ukusekela impilo yakho nokusebenza.
Ikhanda eliyindilinga - Ukubhucungwa komzimba okugcwele okugcwele. Okunamathiselwe okuhle kwabaqalayo.
Inhloko eyisicaba - Ukubhucungwa kwemisipha yomzimba okugcwele. Ngokuqina okwengeziwe nokujula.
Inhloko emise okwe-U –Ukubhucungwa kwemisipha yomzimba ngokugcwele. Ngokusebenza okujule kakhudlwana kwemisipha.
Inhloko ye-Bullet - Trigger point therapy. Okwe-advanced massage kwasendaweni okujule kakhulu kwemisipha.
Langaphambilini Imisipha imishini yokuzivocavoca imisipha ejulile